संसद्मा पहिलोपटक प्रश्नोत्तर : सांसदको प्रश्न मन्त्रीको जवाफ - Nepalpati.com - News Portal from Nepal, Politics, Business, Science, Social, Sport, Ecomony, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actress, Interview| Nepal Pati
शान्ति सुरक्षादेखि महिला हिंसा, बलात्कार तथा गाउँपालिकामा बैंकको शाखा विस्तार गर्नेसम्मको विषयमा सांसद र मन्त्रीबीच संसद्मा पहिलोपटक मौखिक प्रश्नोत्तर भएको छ । प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार संसद्मा बुधबार पाँचजना मन्त्रीसँग सांसदहरूले प्रश्न गरेका हुन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेत, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री थममाया थापा र कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनालले सांसदहरूको विभिन्न प्रश्नको जवाफ दिए । नयाँपत्रिकाकले तयार पारेको सवाल जवाफ
रामबहादुर विष्ट : नेपाली जनताले विषादीरहित खाद्यपदार्थ, फलफूल, तरकारी कहिलेबाट खान पाउँछन् ?
कृषिमन्त्री : हाल विषादी ऐन ०४८ लागू छ । यस ऐनअनुसार विषादी प्रयोग गर्नेलाई कडा कारबाहीको व्यवस्था छैन । समयअनुकूल ऐन संशोधनका लागि पुनर्लेखन गर्दै छौँ । विगतमा भन्दा विषादी निकै कम प्रयोग हुँदै गएको छ ।
सरिता न्यौपाने : हिंसापीडित महिलाका लागि सातै प्रदेशमा स्थापना गरिने भनिएको आवास गृह निर्माण कार्य के हँुदैछ ?
महिलामन्त्री : हाल तीनवटा प्रदेशका पाँचवटा जिल्लामा प्रक्रिया अघि बढेको छ । त्यसबाहेक यसअघि नै १७ वटा जिल्लामा आवास गृह व्यवस्थापन गरिएको छ । अरू २५ वटा जिल्लामा सञ्चालन गर्ने भनेको बजेट पुगेन । अहिले यो शाखा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भएपछि कार्यक्रम गर्न कठिनाइ भएको छ ।
खगराज अधिकारी : पोखरा महानगरपालिका ३१ पचभैया प्राणी उद्यान बनाउनेबारेमा यस मन्त्रालयले पहिलेदेखि नै योजना बनाएको हो । के कति काम अघि बढाइएको छ र कहिलेसम्म योजना सम्पन्न हुन्छ ? यस प्रकारका योजना देशभरि के–कति सञ्चालित छन् ?
वनमन्त्री : नक्सा र लागत इस्टिमेट तयारीको काम भइरहेको छ । यति काम भएपछि आयोजना अघि बढ्नेछ । हरेक प्रदेशमा एउटा प्राणी उद्यान बनाउने योजना बनाएका छौँ । यो वर्ष तीनवटा प्रदेशमा स्थान छनोटको प्रक्रिया टुंगो लगाउने चरणमा छौँ । प्राणी उद्यान बनाउनसके मानव र प्राणीबीचको द्वन्द्व कम हुन्छ । सरकारी राजस्वसमेत बढ्छ । भक्तपुरमा राष्ट्रिय प्राणी उद्यानको गुरुयोजना स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा पुगिसकेको छ ।
अपराधी पत्ता लगाउन वर्षौँ लाग्न सक्छ : गृहमन्त्री
देवेन्द्रराज कँडेल : २१ साउन ०७५ मा भक्तपुरको काँडाघारीबाट अपहरित ११ वर्षीय बालक निसान खड्काको हत्यामा संलग्न भनिएका गोपाल तामाङ र अजय तामाङलाई गरिएको इन्काउन्टरबारे प्रस्ट पारिदिनुहुन्छ कि ?
गृहमन्त्री : माननीयज्यूको प्रश्न गम्भीर छ । सरकारका तर्फबाट यसबारेमा स्पष्टीकरण पहिले दिइसकिएको छ । प्रहरी टोलीमाथि नै बालक अपहरणमा संलग्नले गोली चलाउन लागेकाले प्रतिरक्षाका लागि सुरक्षाकर्मीले गोली चलाएको हो भन्ने सरकारलाई जानकारी भएको विषय हो ।
बालकृष्ण खाणः त्यस्तो अवस्थामा इन्काउन्टरको आदेश कसले दिन्छ ? सुरक्षा प्रमुख, गृहप्रमुख वा सरकार प्रमुखले ?
गृहमन्त्री : अपराधीको खोजी गर्नेक्रममा प्रहरीले आत्मरक्षाका लागि गोली प्रहार गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था नै छ । माथिको आदेश लिइराख्नु पर्दैन ।
प्रेम सुवाल : प्रहरी प्रशासनले पहुँचवालालाई मात्रै शान्तिसुरक्षा दिन्छ भन्ने आममानिसको बुझाइ छ नि ?
गृहमन्त्री : राज्यको दृष्टिकोण सानो ठूलो सबैलाई समान हुन्छ । विभेद गरिएको भन्ने होइन ।
डिला संग्रौला : निर्मलाको बलात्कार र हत्या भएको ६ महिना भयो । प्रमाण नष्ट किन गरियो ? हत्यारा बालुवाटार वा सिंहदरबारको कुर्सीमा छ कि कहाँ छ ?
गृहमन्त्री : आवेशमा आएर निर्मला पन्त घटनाका दोषी बालुवाटारमा छन् कि सिंहदरबारमा छन् भन्नुभयो । अपराधी जहाँ भए पनि सरकारले कारबाहीको दायरामा ल्याउँछ । प्रहरीले तुरुन्त अपराधी पत्ता लगाउन सक्दैन । अपराधी पत्ता लाग्न वर्षौं लाग्न सक्छ । विश्वका विभिन्न घटनाका अपराधी पनि वर्षौंपछि पत्ता लागेको उदाहरण पनि छ । सरकार प्रयत्नशील छ । प्रहरीले अपराध अनुसन्धानमा ९६ प्रतिशत सफलता पाएको छ ।
रामबहादुर विष्ट : अछाम जिल्लाको मंगलसेनमा करिब ७ महिना अगाडि हत्या गरिएका १९ वर्षीय नमराज विष्टका अपराधी पत्ता लगाई कारबाही कहिले हुन्छ ? हत्यारा पत्ता नलाग्ने, तर अनुसन्धान मात्रै जारी छ भन्नुहुन्छ, कसरी चित्त बुझाउने ?
गृहमन्त्री : घटनाका दोषी पत्ता लगाउन अनुसन्धान जारी छ । निर्मला प्रकरणजस्तै यस घटनाका अपराधीलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारले ठूलो प्रयत्न गरिरहेको छ । चित्त बुझाएर बस्ने भन्ने त होइन । प्रहरीको अनुसन्धान सफल हुनेछ ।